Xabad joojin ka jirta caasimada Koonfurta Suudaan ee Juba - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldXabad joojin ka jirta caasimada Koonfurta Suudaan ee Juba
July 12, 2016 Puntland Mirror World 0
Askarta dowlada Koonfurta Suudaan oo ilaalinaya wadooyinka caasimada Juba. Sawirka: Gettyimages/AFP.
Xabad joojin ayaa u muuqata in ay ka jirto caasimada Koonfurta Suudaan ee Juba, kadib afar beri oo dagaal culus uu dhacayay.
Dagaalka ayaa u dhaxeeyay ciidamo kala taageersan Madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisa Riek Machar. Boqolaal qof ayaa ku dhintay dagaalka afarta bari socday.
Madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisa Riek Machar ayaa shalay ku dhawaaqay xabad joojin.
Dagaalka u dhaxeeya labada nin ayaa khatar ku ah heshiiska nabada oo ay dhawaan gaareen Madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisa Riek Machar.
Koonfurta Suudaan ayaa xornimadeeda ka qaadatay Suudaan sanadkii 2011, balse labo sanno kadib waxay gashay dagaal sokeeye oo uu dhaxeeyay Madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisa Riek Machar. Kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaaladaas waxaana ku barakacay malaayiin kale.
July 1, 2016 Nin Yuhuuda oo lagu dilay toogasho ka dhacday Daanta Galbeed
Mareykanka oo sheegay in uu duqayn ku dilay in ka badan 100 maleeshiyo oo Al-Shabaab ah
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in ay weerar duqayn ah ku dileen in ka badan 100 maleeshiyo oo Al-Shabaab ah. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa bayaan ku sheegay in duqayntu shalay oo Talaado ahayd [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Banaanbax looga soo horjeedo sheegashada lahaanshaha Kenya ee qayb kamid ah badda Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah ka dhacay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Boqolaal katirsan bulshada kunool magaalada Muqdisho ayaa ka qaybgalay [...]